यो क्याम्पको ओल 'क्लासिक क्यान | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 9, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
जब तपाईं एकै दिनमा ब्लग पोष्टमा त्यो th० औं टिप्पणीलाई हिट गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि तपाईंले एक स्नायुमा प्रहार गर्नुभयो!
जब मैले निर्णय गरे recent 37 संकेतका साथ मेरो भर्खरको असन्तुष्टिको बारेमा पोस्ट, कुनै पनि हिसाबले मैले अघिल्लो पृष्ठमा हिर्काउने कोशिश गरिरहेको थिइन टेकमेम वा छ जेसन फ्राइड व्यक्तिगत रूपमा मलाई बताउनुहोस्। तपाईं को बारे मा केहि समय को लागी गरीएको छ भनेर थाहा छ कि म एक राम्रो केटा हो जो मेरो ब्लगको साथ उपद्रव बढाउन चाहन्न।
वास्तवमा, जब व्यक्तिहरू मसँग रिसाउँछन् म मेरो साथीबाट टाढा हिंड्ने प्रयास गर्नको लागि बाहिर जान खोज्छु। हामी असहमत हुन सक्छौं र अझै साथी बन्न सक्छौं। वास्तवमा, म प्रायः भन्दा मेरो साथीहरूसँग असहमत छु! उनीहरूलाई सोध्नुहोस्!
त्यो भनिए, ब्लागस्फेरि एक जंगली सीमाना हो। हामीसँग छैन, न हामीसँग कहिल्यै हुनेछ आचारसंहिता। न त हामीले गर्नु पर्छ! म पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमा स्वतन्त्रता मा विश्वास गर्दछु।
म मतभेदमा पनि विश्वास गर्दछु। हामी यो वाइल्ड वाइल्ड वेस्टमा आफ्नै शेरिफहरू हौं र अन्य ब्लगरहरूले धम्की, झूट बोल्दा वा नराम्रो सल्लाह दिंदा हामीले हेर्नु हुँदैन। IMHO, तपाईंको अधिकार उच्च छ, यद्यपि गुगल or टेक्नोराटी, अधिक जिम्मेवारी तपाईंले तथ्यलाई तथ्य र रायलाई रायको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।
म इमानदार छु जब म यो भन्छु कि तपाईले मलाई मेरो लेखोटको लागि कार्यमा लानुहुनेछ। मलाई चुनौती दिनका लागि म तपाईलाई पूर्ण सम्मान गर्दछु। मात्र थाहा छ कि धूलो स्थिर भए पछि, म अझै पनि तपाईं संग असहमत हुन सक्छ। दुई व्यक्तिको लागि समान स्थितिको फरक दृष्टिकोण राख्नु ठीक छ। हामी उस्तै धारणा साझा गर्दैनौं, त्यसैले हामी कहिले चीजहरू उस्तै देख्ने छैनौं।
अप्रिल 9, 2007 मा 10: 33 PM
जेसनले तपाईंलाई भनेको थियो? त्यो कहाँ थियो? अघि वा पछि तपाईंले उसको पोष्टलाई "अज्ञानताको भाग" भन्नु भयो? के तपाइँ मानिसहरूलाई "अज्ञानी" भनेर बोलाउन वरिपरि जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो हातहरू धुनुहुन्छ? तपाईंले व्यक्तिगत पंच फ्याँक्नुभयो।
अप्रिल 9, 2007 मा 10: 44 PM
माइकल होईन, म यसका हातहरू धुदिन। यसैले मैले यस बारे फेरि पोष्ट गरे। तर म अज्ञानी शब्द प्रयोग गरेर फिर्ता लिने छैन, यद्यपि। शब्दको सबै सही परिभाषा अन्तर्गत, त्यो पोस्ट त्यस्तै हो। यदि कोही विपरितको केही प्रमाण दिन चाहन्छ भने, म पक्कै पनि यसका लागि खुला छु। म निश्चित छु उनीहरूको कुनै प्रमाण हुँदैन, यद्यपि। त्यसैले शब्द 'अज्ञानी'।
अप्रिल 9, 2007 मा 10: 43 PM
कसरी तपाईं कसैलाई अज्ञानी कल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि 'राम्रो केटा' भएको आभास पछाडि लुकाउन सक्नुहुन्छ? र थप गुनासो छ कि उनीहरूको आफ्नो राय बचाउन मा तपाईं बताउदै थिए?
अप्रिल 9, 2007 मा 10: 50 PM
कसलाई मैले अन्जान भनिरहेछु? सही शब्द थियो, "केही दिन अघि, तिनीहरूको ब्लगले अज्ञानताको अर्को भाग प्रस्तुत गर्‍यो:"। म स्पष्ट रूपमा केहि पछाडि लुकेको छैन, एसएच। म मेरो ईनिसियल्स प्रयोग गरेर ब्लगमा अज्ञात कमेन्टर होईन। मेरो ब्लग र मेरो पहिचान काफी खुला छ।
यदि पोष्ट अज्ञानी थिएन भने, SvN सँग केही थप तथ्यहरूको साथ तिनीहरूको दावीलाई समर्थन गर्ने प्रत्येक अवसर थियो। के तिनीहरूले गरे? होइन। होइन, अज्ञानी एक सही शब्द थियो।
अप्रिल 10, 2007 मा 12: 20 PM
डगलस, जब तपाईं कसैको लेखनलाई अज्ञानी कल गर्नुहुन्छ तपाईं तिनीहरूलाई अनजान कल गर्दै हुनुहुन्छ। अनुमान यो हो कि पोष्टका लेखक अनभिज्ञ छन्, यदि तपाई यसलाई यति धेरै शब्दहरुमा भन्नु हुन्छ भने। मान्छे लेख्छन्, लेखन लेख्दैन। लेखन आफै लेख्न सक्दैन।
र कसरी मेरो इनिसियल्सको प्रयोगले मलाई बेनामी टिप्पणीकर्ता बनाउँछ? तपाईंले मेरो ईमेल ठेगाना पाउनुभयो, यो मान्य छ र मेरो पूरा नाम समावेश गर्दछ। जब म नयाँ घर को लागी कागजी कार्य आरम्भ गर्छु, के म गुमनाम रूपमा गर्दैछु?
तपाईंको शब्दहरू अलि बढी बुद्धिमानीसाथ छान्नुहोस्, डगलस। तपाईको कम्बल स्टेटमेन्ट्स रेक, राम्रोसँग, अज्ञानता।
अप्रिल 10, 2007 मा 12: 53 PM
धन्यबाद, SH यो स्पष्ट छ कि हामी अज्ञानी शब्दको प्रयोगसँग पूर्ण असहमत छौं। यो ठीक छ, म तपाईंलाई समय निकाल्दै सराहना गर्छु। म तपाईं भन्दा धेरै लामो समयको आगन्तुक भएको र मलाई चिन्नु हुने हुन्थ्यो होला ... तर म तपाईंलाई लाग्छ तपाईं सबै समय सबैलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्न।